Zimbabwe Archives ~ May17.org
Southern Africa IDAHOBIT 2022
joel May 14, 2022
IDAHOT 2017 country page: Zimbabwe
Event organised at the Dutch Embassy. more info here
Vicky June 2, 2017
IDAHOT Report 2016: Zimbabwe
LGBT campaigners once again marked IDAHOT 2016 with a modest action, despite the ongoing threat of violent prosecution. In Bulawayo, campaigners from Gays and Lesbians of Zimbabwe marked IDAHOT with alongside local health organisations and communities. The event was reported...
IDAHO May 24, 2016
IDAHOT Events 2016: Zimbabwe
Every year local LGBT campaign Gays and Lesbians of Zimbabwe marks IDAHOT with a number of small events alongside local organisations and communities. This year the group will hold an event in Bulawayo which they hope will attract over 200...
IDAHO May 15, 2016